पार्केटिङ्ग व्यवसाय सानो लगानी बाटै गर्न सकिने रहेछ !  HamroKatha
पार्केटिङ्ग व्यवसाय सानो लगानी बाटै गर्न सकिने रहेछ !
३० औ वर्षदेखि पार्केटिङ्ग व्यवसायमा निरन्तर लागिरहेका छन् । उनको उत्पादनको बजार अहिले मुख्य रूपमा काठमाडौँ केन्द्रित छ । तर अब भने काठमाडौँ बाहिरका सहरबाट समेत माग आउन थालेको छ ।
हाम्रो कथा २०७५ माघ २९ गते १७:५१
खेल खेल्नलाई खेलको नियमहरू जान्नु पर्छ। व्यवसाय भनेको पनि त्यस्तै हो ।
धादिङका शम्भु धमला व्यवसायीक पृष्ठभूमिका व्यक्ति होईनन । परिवार र आफन्त सबैजसो जागिरे थिए । हुन त उनको पनि एक दशक जागिरे जीवनमै वित्योे । यतिखेरसम्म उनलाई लाग्थ्यो उद्यमी बन्ने कुरा हाम्रो बसमा छैन । तर जागिरकै सिलसिलामा उनले धेरै सफल उद्यमीका कथा पढ्ने र सुन्ने मौका पाए । हो त्यहीँबाट उनको जीवनको लक्ष्यले फरक मोड लियो ।
इको पार्केट एण्ड डेकोरेटरका संस्थापक तथा सञ्चालक शम्भु धमला बताउनुहुन्छ, “काठमाडौँमा व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका परिवारहरूको इतिहास र कहानीहरूले निकै प्रेरित गर्‍यो। त्यस्तै आफ्नू पनि गरौँ त भनेर व्यवसाय सुरु गरेको हो ।”
उनले दशक लामो जागिरलाई बिट मारे । व्यवसाय त गर्ने । एक्लै कसरी काम सुरु गर्ने होला ? अलि हिम्मत भएन । पार्टनसिपमा व्यवसाय अघि बढाउने निधो गरे । पारिवारिक रूपमै व्यवसाय अघि बढाउने एउटा सर्कल तयार भयो । यो कुरा २०४६ सालको हो ।
शम्भु धमला थप बताउनुहुन्छ,”मेरो परिवारमा कि त खेती-किसानी गरिन्थियो कि त जागिर खाने चलन थियो । मैलै त्यही मोडालिटी (शैली) परिवर्तन गर्दै लैजानु थियो । सबै इष्ट-मित्रहरूलाई पनि व्यवसायका संगलागना गराउन चाहन्थे । परिवारसँग नै काम गर्ने इच्छा बोकेको थिए ।”
उनले पार्केटिङ्गको व्यवसायमै किन हात हाले त ? यसको पनि एउटा संयोग छ । उनका केही आफन्त काठमाडौँमा चलेको पार्केट कम्पनीमा काम गर्थे । उनीहरुलेनैं पार्केटिङ्ग व्यवसायमा राम्रो हुने सल्लाह दिएका थिए । त्यसपछि उनले पार्केट व्यवसायका सम्बन्धमा बुझ्न थाले । केही समय उनले पार्टनरसिपमा काम सुर गरे ।
शम्भु धमला सम्झनुहुन्छ ,”परिवारमा काका र दाइहरूलाई आइडिया सुनाए। दाइहरूले साथ दिनुभयो । अनि सानो स्केलमा २०४० सालमा व्यवसाय सुरु गर्‍यौ।”
करिब एक दशक उनी पार्टनरसिपमैं रमाए । त्यसपछि भने साथीहरूबिच सल्लाह भएर एक्ला–एक्लै व्यवसाय सुरु गर्ने निधो गरे । अनि उनले सुरु गरे इको पार्केट एण्ड डेकोरेटर प्रा.लि. । चितवनको पिठुवामा रहेको यो त्यही फ्याक्ट्री हो जहाँ धमला अहिले उद्यममा रमाएका छन् ।
शम्भु धमला व्यक्त गर्दछन्, “काठको गुणस्तरबाट मूल्य निर्धारण हुने हो। प्रति स्कवायर फुट १५० रुपैयाँ पर्ने देखि ७५० रुपैयाँ पर्ने सम्मको पारेक्टिङ्ग गर्न सकिन्छ।”
४ जना कर्मचारी राखेर यो कम्पनी सुरु भएको थियो । अहिले ६० जनाले रोजगारी पाएका छन् यहाँ । प्रति स्क्वायर फिट १ सय ५० देखि ७ सय रुपैयाँ मूल्य पर्ने पार्केट तयार हुन्छ ।
उनले बजारबारे बताए, “काठमाडौँमा बजार बिस्तार हुँदै छ । विदेशबाट फर्केको नेपालीहरूले महत्त्व बुझ्नु भएको छ । त्यस्तै काठमाडौँ स्थित विदेशी दूतावासहरूमा पार्केटिङ्ग गरेका छौँ । पार्केटिङ्गमा शुद्ध काठ प्रयोग हुने हो । त्यसैले गुणस्तर राम्रो बनाई राख्न हामीलाई गाह्रो पर्दैन। मार्केटिङमा खर्च गर्नु परेको छैनन् । सन्तुष्ट ग्राहकहरूले आफ्नू साथीभाइहरूलाई हाम्रो बारेमा बताउनुहुन्छ । त्यसैको आधारमा ग्राहक बढ्दै गएका हुन् ।”
सुरुवात निकै गार्हो भयो । उत्पादन भएको पार्केट बिक्री गर्नै सकिएन । मुस्किलले एक–दुई हजार स्क्वायर फिट बिक्री हुन्थ्यो । उनी आफ्नो उत्पादनका बारेमा जानकारी गराउन घर घर सम्म पुग्थे । अहिले भने समय फेरिएको छ । उनको यही मेहनतका कारण व्यवसाय एकपछि अर्को गर्दै उकालो लाग्दै गयो । उनका उत्पादनलाई पाँच तारे होटेलले समेत प्रयोग गरेको छ । नेपालमा रहेका केही विदेशी दूतावासमा समेत उनको उत्पादन पुगेको छ ।
शम्भु धमला थप बताउनुहुन्छ, “बजार बिस्तारको सम्भावना धेरै छ । तर अहिले ग्राहक काठमाडौँ केन्द्रित छन् । मलाई नेपालमा अन्य वीरगञ्ज , नेपालगञ्ज जस्ता सहरहरूमा पनि पार्केटिङ्ग गर्ने चलन चलाउने इच्छा छ । बजार बिस्तार अझ गर्नु छ ।”
धमला ३० औ वर्षदेखि पार्केटिङ्ग व्यवसायमा निरन्तर लागिरहेका छन् । उनको उत्पादनको बजार अहिले मुख्य रूपमा काठमाडौँ केन्द्रित छ । तर अब भने काठमाडौँ बाहिरका सहरबाट समेत माग आउन थालेको छ ।
शम्भु धमला व्यक्त गर्दछन्, “सुरुको लगानी धेरै नै हुनु पर्चा भन्ने छैन। कुन स्केलमा बिजनेस गर्ने कुराले लगानी निर्धारण गर्ने हो। ”
सानो लगानीमा पार्केट व्यवसाय गर्ने रामशरण हुमागाई, एक उदाहरणीय पात्र हुन्
“मैले २०५८ बाट यो क्षेत्रमा काम गर्दै गरेको हो। अनि आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेको १० वर्ष भयो। मैले जम्मा ७०/८० हजार लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरेको हुँ। अन्य फर्निचर बनाउँदा बाकि बचेका टुक्रा-टाक्री दाउराहरूलाई पर्केटिंगमा प्रयोग गरेका हौँ। यस व्यवसायमा राम्रो तरिकाले काम गरे २० देखि २५ प्रतिशतको प्रोफिट छ। अन्य व्यवसायमा भन्दा दोब्बर फाइदा छ। छलकपट नगरी काम गर्ने हो। समयमा कर तिर्ने हो। सबैका आ-आफ्ना ग्राहक छन्। त्यसैले प्रतिस्पर्धाले असर गर्छ कि भन्ने शङ्का अहिलेसम्म गर्नु परेकै छैन।”
रामशरण हुमागाईले पर्केटिंगमा काम सुरु गर्न चाहने युवाहरूलाई यी सुझाव दिएका छन् :-
— काम गर्दा आफ्नो बजेट कसरी मेन्टेन गर्ने, कस्टिङ्गको विषयलाई विशेष ख्याल गर्न सक्नु पर्छ।
— आफूले प्रयोग गर्ने मेसिनहरूबारे ज्ञान हुनुपर्छ।
— आफैले पनि काठको काम गर्ने अभ्यास गरी राख्नु पर्छ। काम गर्ने मान्छेको अभाव छ हाम्रो बजारमा त्यसैले बारेको बेलामा आफै काम गर्न तयार राख्नु पर्छ।
— यदि पर्केटिंगमा व्यवसाय गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने २/३ वटा मेसिन खरिद गर्ने हो। काम सुरु गर्न पाँच देखि सात लाखको लगानी पर्याप्त हुन्छ।
नेपालमा पार्केटिङ्गको बजार
नेपालमा पनि पार्केटिङ्गको बजार बढ्दो छ । यहाँ नेपालमा भारत, चीन, मलेसिया, ताइवान, इटली लगायतका देशबाट पार्केटिङ्ग काठका पाता आयात हुन्छ । आयातित पार्केट अर्थात् लेमिनेटेड पार्केटिङ्ग बजारमा काठजस्तो देखिन्छ । यो पोलिभिनलाई प्रशोधन गरी बनाइन्छ । यो नेपालमा चीन र भारतबाट आयात हुने गरेको छ । तर थोरै मात्रामा मूल्यमा फरक भए पनि नेपाली पार्केट हाम्रै उत्पादन हो । जुन यी आयातित पार्केट भन्दा कयौँ गुणा टिकाउ हुने गर्छ । यसका कारण पनि नेपाली पार्केटले ग्राहकको मन तानेको छ ।
मार्बल तथा टायलको तुलनामा पाकेटिङ उपयोगी भएकाले यसको प्रयोग बढेको व्यवसायीहरूको अनुभव छ । कार्पेटको तुलनामा सफा देखिने र फेरी रहनु नपर्ने भएकाले पार्केटप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढेको हो ।
पार्केटका यी तयारी सामान हेर्नुस् त कति आकर्षक छ । तर यी आकर्षक पार्केट यस्ता काठका टुक्राबाट बनेका हुन जुन फालिने हो वा बाल्न मात्र प्रयोग हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
यस्ता पार्केट घर, अफिस, होटेल, हस्पिटल लगायतका ठाउँमा कार्पेट, मार्बल वा टालयको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । निर्माणधीन आवासीय भवन तथा पुराना घरहरूमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ ।
पार्केट स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत निकै लाभदायक मानिन्छ ।
पार्केट के हो ?
युरोपियन देशबाट सुरु भएको पार्केटिङ्ग को प्रयोग नेपालमा पछिल्लो केही दशकदेखि बढेको हो । बढ्दो आवासीय योजना र घर सजावटका कारण यसको प्रयोग बढेको पाइन्छ । नेपालमा पार्केटिङ्ग लाई घर कार्यालय तथा व्यवसायको आन्तरिक सजावटमा नौलो शैलीका रूपमा लिइन्छ ।
पार्केट फ्रेन्च भाषाको शब्द हो । नेपालीमा यसको अर्थ ‘बर्गाकार विकर्ण’ हुन्छ । सन् १६६४ मा डीभर्सेलिजको नामबाट सबैभन्दा पहिले पार्केटिङ्गको सुरुवात भएको हो ।